Cover Letter မိတ်ဆက်စာ (သို့) အပေါ်စာ ﻿
Cover Letter မိတ်ဆက်စာ (သို့) အပေါ်စာ
Tags: jobs vacancy work article cover letter
Cover Letter (မိတ်ဆက်စာ)
Cover Letter ဆိုတာကို online အလုပ်လျှောက်လွှာ များမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကြီးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အပြင်မှာအလုပ်လျှောက်လွှာတင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် online မှာ အလုပ်လျှောက်လွှာတင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ် ခေါ်သူဟာ တစ်ချိန်တည်းအတွင်းမှာ အလုပ်လျှောက်လွှာပေါင်းများစွာကို လက်ခံရရှိ သွားနိုင်ပါတယ်။ လူစိတ် ဝင်စားပြီး ကမ်းလှမ်းချက်သာလွန်တဲ့ အလုပ်ခေါ်ဆိုခြင်းတိုင်းမှာ ရာနှင့်ထောင်နှင့် ချီသော CV များဟာ ရောက် ရှိလို့သွားမှာပါ (eg Telenor , Ooredoo)။ အဲသည်အတွက် အလုပ်ခေါ်ဆို သူများဟာ လျှောက်ထားသူများပြား လှတဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာ CV များကို လေ့လာဖတ်ရှု နိုင်ဖို့ အတွက်အချိန်များစွာအသုံးပြုပြီး CV များကို စိစစ်ရွေးချယ်ရတော့မှာပါ။ အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့ CV တိုင်းမှာလည်း အလုပ်ခေါ်သူအတွက်လို အပ်တဲ့ ကိုက် ညီမှု ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး ပညာရေး စသည်များကိုရှာဖွေ နိုင်ဖို့အတွက် filing cost (သို့) printing cost များဟာလည်း အလုပ်ခေါ်သူများအတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပြီး စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ အထက်ရှိ သော CV တွေကိုလည်း စိစစ်ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အချိန်မြောက်မြားစွာကြာမြင့်မှာပါ။
သည်လိုအခက်အခဲမျိုးကို အလုပ်ခေါ်စာမှာပါဝင်တဲ့ ဖော်ပြချက် အတိုင်းလိုက်လျောညီထွေမှု ရှိတဲ့ မိတ်ဆက် စာ တစ်ဆောင်မှ အလုပ်ခေါ်သူများ ကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
လိုတိုရှင်း ပြီးထိရောက်မြန်ဆန်မှု ရှိတဲ့ မိတ်ဆက်စာ ရေးသားနည်း အချက်များ ဥပမာ နှင့်တကွ ဆန္ဒရှိတဲ့ အလုပ်အကိုင်များကို ရရှိစေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများမှလည်း ခင်မင်သူ မိတ်ဆွေ ပေါင်းအသင်းများ အခက်အခဲရှိနေ သူများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေ ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ပထမစာပိုဒ်: [ မိမိလျှောက်ထားလိုသောအလုပ်အကိုင်ရာထူးနှင့် အလုပ်ခေါ်စာကိုသိရှိရာနေရာ။]
ဒုတိယစာပိုဒ်: [ပညာအရည်အချင်း ၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့်လုပ်သက် များကို အလုပ်ခေါ်စာမှပါရှိသော ဖော်ပြချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုကြောင်း စိစစ်သူမှ ထင်သာမြင်သာမှုရှိ အောင် ရေးသားခြင်း နှင့် တကွ လျှောက်ထားရသောအကြောင်းအရင်း။]
တတိယစာပိုဒ်: [လျှောက်ထားသာမှ အလုပ်နှင့်ပတ်သက် သည့် မိမိ၏ အရည်အချင်းများကို ပို၍ဖော်ပြနိုင်ရန် အခွင့်အ ရေးကို မျှော်လင့် ကြောင်း နှင့် ကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုခြင်း။]
I am Nyi Nyi Aung. I am writing to inquire about vacancy openings at Telenor Company foraresearch assistant. And I found this opportunity from the online job-site namely www.jobsinyangon.com.
I am graduated from University of Computer Study Yangon, and the degree I earned is Master of Computer Science. I have done several researches and thesis papers regarding to data mining and analysis for4years. Now I am working asaresearcher ataformer research market company in Yangon and I would like to continue my career with the Telenor group for future accomplishments and challenges.
Asaprofessional administrative assistant with excellent research skills, I am eager to contribute my abilities and experience to Telenor Company. Given my extensive training and background, I believe I can help Telenor Company meet its goal of providing only the most accurate and timely information to its clients.
Thank you for your time. And I am looking forward to discuss my qualifications further. Please find enclosed my resume and my references as attached.
ph: 09 1234567
စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထက်မကျော်လွန် အောင်နှင့် အလုပ်ဖော်ပြချက် အတိုင်းမီးမောင်းထိုး မိအောင် ရေးသား နိုင်စေဖို့ ဂရုပြုစေလိုပါတယ်။
Cover Letter (မိတ်ဆက်စာ) ရေးသားနည်း ကိုဒီတင်ပဲကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
JobsInYangon ညီအစ်ကိုမောင်နှမ များ နှစ်သက်ရာအလုပ်အကိုင်များအတွက် ရရှိ အဆင်ပြေ နိုင်ပါစေ လို့